ပရိသတ်တွေမမြင်ဖူးသေးတဲ့ ဒိန်းဒေါင်ရဲ့အမြွှာသားချောလေးနှစ်ယောက်အားဗီဒီယိုလေးရိုက်ကူးကာမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ လူရွှင်တော်ချက်ကြီး(ရုပ်သံ) – Maythadin
ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်အောင် ဟာသပြက်လုံးလေးတွေကို အမြဲပြောလေ့ရှိသူကတော့ သရုပ်ဆောင် ဒိန်းဒေါင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဟာသလူရွှင်တော်အဖြစ်နဲ့သာမက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူး
ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလှူအတန်းတွေလည်း အမြဲလှူတန်းနေတာကြောင့်လည်း အမြဲကံကောင်းမှုတွေ ရရှိနေတာပါ။ဒိန်းဒေါင်ဟာ လတ်တလောမှာလည်း ပရဟိတအလုပ်တွေကို စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို ကိုယ်တိုင်
သွားရောက်ကာ ကူညီဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ ဒိန်းဒေါင်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေတင်မကဘဲ အနုပညာရှင် အချင်းချင်းကလည်း ချီးကျုးနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိန်းဒေါင်ဟာ သူ့ရဲ့ သားလေးတွေကိုပါ ပရဟိတအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခိုင်းထားတာပါ။မနေ့ညကလည်း ဟာသလူရွှင်တော်ချက်ကြီးရဲ့
??? ??? အကောင့်မှာ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခု တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ရုပ်ချင်းအရမ်းဆင်တဲ့ ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ အမြွှာသားချောလေးနှစ်ယောက်ကို ခွဲခြားပြနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ကြည့်ရှုခံစားနိုင်အောင် ဒီဗီဒီယိုလေးကို တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
ပရိသတျတှကေို ရယျမောပြျောရှငျအောငျ ဟာသပွကျလုံးလေးတှကေို အမွဲပွောလရှေိ့သူကတော့ သရုပျဆောငျ ဒိနျးဒေါငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ဟာသလူရှငျတျောအဖွဈနဲ့သာမက သရုပျဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့ပါ ရုပျရှငျနဲ့ဗီဒီယိုဇာတျကားပေါငျးမြားစှာကို ရိုကျကူး
ခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ အလှူအတနျးတှလေညျး အမွဲလှူတနျးနတောကွောငျ့လညျး အမွဲကံကောငျးမှုတှေ ရရှိနတောပါ။ဒိနျးဒေါငျဟာ လတျတလောမှာလညျး ပရဟိတအလုပျတှကေို စှမျးစှမျးတမံ လုပျဆောငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ လိုအပျတဲ့နရောတှကေို ကိုယျတိုငျ
သှားရောကျကာ ကူညီဖွရှေငျးပေးနတေဲ့ ဒိနျးဒေါငျကိုတော့ ပရိသတျတှတေငျမကဘဲ အနုပညာရှငျ အခငျြးခငျြးကလညျး ခြီးကြုးနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒိနျးဒေါငျဟာ သူ့ရဲ့ သားလေးတှကေိုပါ ပရဟိတအလုပျတှကေို လုပျကိုငျဆောငျရှကျပေးခိုငျးထားတာပါ။မနညေ့ကလညျး ဟာသလူရှငျတျောခကျြကွီးရဲ့
??? ??? အကောငျ့မှာ ဗီဒီယိုလေးတဈခု တငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ ရုပျခငျြးအရမျးဆငျတဲ့ ဒိနျးဒေါငျရဲ့ အမွှာသားခြောလေးနှဈယောကျကို ခှဲခွားပွနတေဲ့ ဗီဒီယိုလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှလေညျး ကွညျ့ရှုခံစားနိုငျအောငျ ဒီဗီဒီယိုလေးကို တဈဆငျ့ ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။